Mareykanka oo aqoonsaday madaxweynaha cusub ee Bolivia Janeen Annez – Radio Daljir
Mareykanka oo aqoonsaday madaxweynaha cusub ee Bolivia Janeen Annez
Nofeembar 14, 2019 8:46 b 1
Dowlada mareykanka ayaa shaacisay in ay u aqoonsatay Janeen Annez in ay tahay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalka Bolivia.
Wasiirka arimaha dibada Mareykanka Mike Pombeo ayaa sheegay in Mareykanku u aqoonsan yahay haweenaydan katirsan aqalka Duqeyda Bolivia Janeen Annez in ay tahay Madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalkaasi.
Tani ayaa imanaysa ka dib iscasilaadii madaxweyne Morales oo hadda magan gelyo siyaasadeed ku jooga dalka Mexico, iyadoo ay weli sii socdaa qalaalasahii ka dhashay doorashooyinkii la qabtay 20-kii October ee sanadkan, iyadoo malinimadii arbacadii iska hor imaad dhex maray taageerayaasha madaxweynihii hore iyo Boliiska Bolivia uu ku geeriyooday wiil dhalinyaro ah sida uu xaqiijiyey dhaqtar jonny Gozman.
Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada Bosaaso iyo isimada oo baaqdiray (dhegayso)
Saaka & Dunida iyo Cabdixakiin Xuseen Xasan, Daljir Garoowe ( dhegayso )
YES BOSS….AMERICAN EMPIRE!!!!!.
AQALKA CAD EE MARAYKANAKA BAA DUNIDAN KA AH UNITED NATION.
HABARI MA KAADIDO DUNIDAN AAN AQALKA CADI OGAYN!!!.KKKKKKK,.